REPUBLICADAINIK | कम्युनिस्टहरूको चक्रब्यूहमा मुलुक गयो, संसद ब्यूताऔँः नेता सिटौला - REPUBLICADAINIK
कम्युनिस्टहरूको चक्रब्यूहमा मुलुक गयो, संसद ब्यूताऔँः नेता सिटौला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बदर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ ले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा शुक्रबार आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘मैले बदर हुन्छ भन्दा बदर हुन्छ वा हुँदैन त्यो कुरा न्यायाधीशहरूले जानुन्’, उनले भने, ‘अदालतसम्म पुग्ने विषय होइन यो ।’
नेता सिटौलाले नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै संसद विघटनलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर सबै नेपाली नागरिकले बोल्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संसद विघटनको विषयमा कुनै पनि सचेत नागरिकले बोल्नुपर्छ । यो विषयमा नबोल्दा गलत हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो न्यायालयलाई कसैले पनि नाट्यशालाको रुपमा कसैले पनि नभनेको बताएका कांग्रेस नेता सिटौलाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखले संविधानभित्रबाट बोलेर संसद विघटन गर्नु हुँदैन भनेर बोलेको बताए । सिटौलाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र पूर्वसभामुखको बचाउ गरेका छन् ।
उनले अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने अवसर पाएको बताएका छन् । संविधानमा संसद विघटन गर्ने विषय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताए ।
‘शेरबहादुर देउवाको पालामा संसद विघठन भयो । देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेर मनोनीत गर्नुभयो । भयानक निरंकुशता आयो’, सिटौलाले भने, ‘०४७ सालको संविधान दुर्घटनाग्रस्त भयो । दोस्रो पटकको विघटनले संसद मात्रै गएन । देशको व्यवस्था गयो । संसद मात्रै गएन । राजतन्त्र गयो ।’
नेता सिटौलाले कम्युनिस्टहरूको चक्रब्यूहमा देश फस्दै गएको बताए । उनले ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई अदालतले सदर ग¥यो भने देशको अवस्था के होला ? भनेर चिन्ता जनाएका छन् । सिटौलाले नेपाल र नेपाली जनतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएबो बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुर्खताले देश दुर्घटनातिर नजाओस् । माफी माग्नुस् । संसद ब्युताइदिए हुन्छ । कम्युनिस्टले आत्मालोचना गरेपुग्छ ।’
कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरू उमाकान्त चौधरी, गगन थापा, उत्तम चापागाइँलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
Published : Friday, 2021 January 29, 5:56 pm
डा.महतद्वारा कांग्रेस कमजोर पार्ने ‘पूर्वपञ्चे’ र ‘मण्डले’हरूलाई सुध्रिन अल्टिमेटम, भोक्रेठ्याक लगाउने चेतावनी
राष्ट्रपति–रामचन्द्र–गगन र शेखरले बल्ल बुझे देउवाका कुरा
कांग्रेस सह–महामन्त्री डा.महतको कुराले कम्युनिस्टले तोरीको फूल देखे